Dogecoin စျေး - အွန်လိုင်း DOGE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Dogecoin (DOGE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Dogecoin (DOGE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Dogecoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $322 910 475.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Dogecoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Dogecoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DogecoinDOGE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00262DogecoinDOGE သို့ ယူရိုEUR€0.00242DogecoinDOGE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00202DogecoinDOGE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00256DogecoinDOGE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0243DogecoinDOGE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0181DogecoinDOGE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0606DogecoinDOGE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0104DogecoinDOGE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00347DogecoinDOGE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00396DogecoinDOGE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0496DogecoinDOGE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0204DogecoinDOGE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0115DogecoinDOGE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.188DogecoinDOGE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.405DogecoinDOGE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00366DogecoinDOGE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00413DogecoinDOGE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0827DogecoinDOGE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0184DogecoinDOGE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.293DogecoinDOGE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.16DogecoinDOGE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.953DogecoinDOGE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.168DogecoinDOGE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0642
DogecoinDOGE သို့ BitcoinBTC0.0000003 DogecoinDOGE သို့ EthereumETH0.00001 DogecoinDOGE သို့ LitecoinLTC0.00003 DogecoinDOGE သို့ DigitalCashDASH0.00003 DogecoinDOGE သို့ MoneroXMR0.00003 DogecoinDOGE သို့ NxtNXT0.182 DogecoinDOGE သို့ Ethereum ClassicETC0.000274
DogecoinDOGE သို့ ZCashZEC0.00004 DogecoinDOGE သို့ BitsharesBTS0.0823 DogecoinDOGE သို့ DigiByteDGB0.355 DogecoinDOGE သို့ RippleXRP0.00946 DogecoinDOGE သို့ BitcoinDarkBTCD0.000107 DogecoinDOGE သို့ PeerCoinPPC0.0109 DogecoinDOGE သို့ CraigsCoinCRAIG1.42 DogecoinDOGE သို့ BitstakeXBS0.133 DogecoinDOGE သို့ PayCoinXPY0.0544 DogecoinDOGE သို့ ProsperCoinPRC0.391 DogecoinDOGE သို့ YbCoinYBC0.0001 DogecoinDOGE သို့ DarkKushDANK1 DogecoinDOGE သို့ GiveCoinGIVE6.75 DogecoinDOGE သို့ KoboCoinKOBO0.621 DogecoinDOGE သို့ DarkTokenDT0.00241 DogecoinDOGE သို့ CETUS CoinCETI9
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 23 Feb 2020 03:20:01 +0000.